300kg, 500kg, Kombiyuutarrada dhalinta ee samafal dhalidda 1000kg
Bogga ugu weyn / Foosto dhalaalid ah oo dhalaalaya / Foornada Cabbitaanka Baadhista / Foornada dhalaalida Maarta
Categories: Foornada Cabbitaanka Baadhista, Foosto Koronto, Foosto dhalaalid ah oo dhalaalaya, Foornada Dhuxusha ee Dhuxusha Tags: dhalaalista indhaha barafka, Bacriminta Copper, Foornada Cabbitaanka Baadhista, foornada qulqulaya naxaas, naxaasinta, foornada naxaasiga ah ee induction, Foornada barafka dhalaalaysa, Baaxad dhexdhexaad ah oo baraf ah, dhalaalidda foornada indhasharaynta
200kg ^ 3000kg Foorno naxaas ah oo dhalaalaya ayaa waxaa loo adeegsadaa foornada iyo naxaasta naxaasiga ah, naxaasta iyo baakidhka copper, chip copper, ingot cop, iwm.
Xidhiidhada Qalabka Isku xirnaanta Midabka Baaxadda Iskudhiga ah, foornada dhalooyinka laga dhaliyo aluminium waxaa loogu talagalay si gaar ah loogu talagalay uumiga birta cufnaanta hoose, isticmaalka saxda ah heerkulka saxda ah isla markaana si siman u qaybinaya kuleylka. Tani waxay muhiim u tahay qalabyada sida naxaasiga ah, naxaasiga, naxaasta haddii aad rabto inaad ilaaliso nolosha inta la filayo ee naxaasta, naxaasta iyo tayada. Foornada ugu wanaagsan ee bambada loogu talagalay naxaas / copper waxay ku siin doontaa xakameyn heerkulka saxda ah si loo gaaro hadafkan.
AFaa'iidooyinka foornada elektromagnetic Mid Frequency Brass / Copper Melting with induction:
1, keydso tamar oo yaree heerkulka deegaanka
Rugta asaasiga ah ee foornada asalka ah ee hawada wasakhda ah, laakiin sidoo kale tubbada qashin qubka, gudaha iyo dibedda kulaylka foornadu waxay leedahay tiro ballaadhan oo lagu qaybiyo aqoon isweydaarsiga, taas oo keentay in aqoon-is-weydaarsi heer sare ah. Sidoo kale waa foornada asalka ah, inta badan baxsashada hawada, waxaa jira hoos udhaca kulaylka, soo-saarka korontada, kordhinta qiimaha wax soo saarka. Isla mar ahaantaana, heerkulka cimiladu wuu kordhaa. Nidaamka kuleylinta korontada dhaliya ee korontada ku shaqeeya, kuleylka kuleylka wuxuu ku dhexjiraa kulaylka moolka, si loo yareeyo luminta kuleylka, kuleylka degdegga ah, si dhaqso ahna u dhalaalaya, oo yareynaya isticmaalka tamarta. Yaree isticmaalka korontada. Ka dib marka la barbardhigo imtixaanka tijaabada ah iyo isbadelka, saamiga tamarta badbaadinta waa 20% -40%.
2, Kuleylka degdegga ah, xakamaynta heerkulka saxda ah ee dhabta ah
Nidaamka kuleylka korontada ee electromagnetic waa iyadoo loo marayo khadadka moobiinka dhulka si loogu kululeeyo kuleylka kuleylka degdegga ah, qalajinta aluminiinka degdega ah. Xakamaynta heerkulka waa waqti dhab ah oo sax ah, taas oo hagaajineysa tayada wax soo saarka iyo hagaajinta waxtarka wax soosaarka!
3 iyo adeeg nolol dheer, dayactir sahlan
Habka kulaylka dabiiciga ah ee foornada loo isticmaalo waa in la isticmaalo kuleylka kulaylka, kuleylka diirada ee jawiga heerkulka sarre ee mudada dheer ee isticmaalka oxidation wuxuu dhalin doonaa dhimista nolol maalmeedka, qiimaha dayactirka sicirka. Kobbinta kuleylka elektromagnetic-ka waxaa lagu sameeyey qalab kulul iyo xargo heerkulkiisu sarreeyo, sidaa darteed nolosha adeeggu waa muddo dheer oo aan lahayn dayactir.
Isgaadhsiinta elektromagnetic ee korriinka iyo horumarinta tiknoolajiyada, habsami-u-socodka iyo tiknoolajiyada qaybaha, software, sida ilaalin lagu kalsoon yahay awoodda hadda jirta waxay noqon kartaa 2-200KW.
Nidaamka isbeddelka ayaa kicinaya kuleylka dhejinta elektromagnetic, kaas oo yareyn kara heerkulka sare ee mashiinka, jidhkana bini-aadanka si ammaan ah ayaa loo taaban karaa, si looga fogaado dhacdooyinka gubashada iyo shilalka ay sababaan habka kuleylka dabiiciga ah iyo ilaalinta amniga waxsoosaarka ee shaqaalaha.
1 keydinta tamarta iyo ilaalinta deegaanka, aaladaha korantada IGBT ee Jarmalka, isku halaynta sare, howlgalka xasilloon iyo kharashyada dayactirka oo hooseeya.
2) inta jeer ee marxaladda dijitaalka ah la xiray raadinta loop loo yaqaan, load automatic impedance matching.
3 xakamaynta korontada, si looga fogaado isbeddelka heerkulka ee hoos u dhaca awooda.
4) oo ka sarreeya fiilooyinka, hoos u dhac, marxalad la'aan, ka badan hadda, kor u qaadista kulaylka, muujinta wakhtiga dhabta ah ee xuduudaha, ogaanshaha qaladka iyo digniinta; ka daadinta qaylo-dhaanta tooska ah, gooyo korontada iyo xaaladda shaqada ee muuqaalka dhabta ah.
5) Nidaamka kontoroolka kuleylka ee PID, heerkulka kulka kulaylka, ka hortagga heerkulka aluminiimka aluminiumka, gubida wax yar, qalabka biraha ee qalabka ah si loo hagaajiyo heerka shahaadada alaabta.
6 (LED) xakameyn heerkulka cimilada, cabirida iyo xakamaynta saxda ah ee heerkulka 3, maadada aluminiumku waa fiican tahay, heerkulku wuu kacayaa si deg deg ah, heerkulkiisa kulaylka waa sahlan yahay, waxtarka waxsoosaarku aad ayuu u sarreeyaa;
7) qaab-dhismeedka udubdhexaadka ah ee foornooyinka mulkiilayaasha polycrystalline ee foornada, mugga yar, hanti-badinta wanaagsan, isticmaalka tamarta hooseeya, wax-qabadka sarreeya, heerkulka ka sarreeya heerarka 1200, nolosha shaqada dheer;
8. Hawlgalku waa sahlan yahay, awoodda ayaa lagu hagaajin karaa shaqada;
9 (100%) muddada dheer, awoodda ugu badan, si loo hubiyo hawlgalka saacadaha 24.
Awoodda dhalidda ee taxanaha SMJD Xidhiidhka Dhexdhexaadinta Baaxadda Midda Boodbaxa / Bambooyin / foorno naxaas ah:
nooca Power Input Buuxinta Awoodda Heerkulka sarreeya
birta, birta aan lahayn naxaas, dahab, lacag (hurdi, jeex) aluminum, aluminium,
Qashinka Aluminium, Aluminium Aluminium, Pop waxay noqon kartaa
Qodobka Aluminium Qodobka Qalabaynta Dib-u-warshadeynta
Calaamadaha foornada dhalidda ee SMJD
Aluminium, Copper, Buug-gacmeedka Rug-dhalinta Dabaysha
[pdf-embedder url = ”https://dw-inductionheater.com/wp-content/uploads/2018/12/AluminumCopperIron-Induction-Melting-Furnace-manual.pdf” cinwaan = ”Aluminium, Copper, Iron Induction dhalaalida Foornada Buugga ”]
warshadaynta dhalooyinka aluminiumka ah
300kg | 500kg | 800kg | 1200kg Dhuxul Xidhxidhka Aluminiinka Dhicidda